‘हामी सधैं फ्रन्ट लाइन’ - Pradesh Today
Homebreaking-news‘हामी सधैं फ्रन्ट लाइन’
विश्व कोरोनाभाइरसले आक्रान्त छ । यही बीचमा नेपालमा ७ सयको हाराहारीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।
जसमध्ये ५ नं. प्रदेश कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेको छ । कोरोना नियन्त्रण र सचेतनाको कुरामा जिल्लामा विभिन्न व्यक्तिहरुले निभाएको भूमिका र पु¥याएको योगदानको पनि निकै प्रशंसा हुँदै आएको छ ।
यो बीचमा दाङका स्थानीय तहमा रहेर कोरोना नियन्त्रण र रोकथामसँगै स्वास्थ्य सेवालाई चुस्तदुरुस्त पार्न स्वास्थ्यकर्मीहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन् ।
तिनै स्वास्थ्यकर्मीहरुको आफ्नो दैनिकीलाई समेत वास्ता नगर्दै दिनरात खटिरहदा विभिन्न किसिमका समस्यासमेत झेलिरहेका छन् ।
स्वास्थ्यकर्मीहरु विभिन्न समस्याका बाबजुद पनि कोरोना नियन्त्रणको अभियानमा दिनरात खटिरहदाको अनुभव, समस्या र उपायहरु देखिएका छन् ?
यही सेरोफेरोमा रहेर जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुसँग प्रदेश टुडेको नियमित स्तम्भ टुडे राउण्ड टेबलमा छलफल गर्ने प्रयास गरेका छौं ।
सबैको साथ मिल्दा हौसला
कोरोना नियन्त्रणको लागि सरकारले लकडाउन घोषणा गर्नु अघिदेखि नै हामी निरन्तर आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेका छौं ।
यो बीचमा स्थिति नियन्त्रणमा आउनुको साटो झनै भयावह हुँदै गएको अवस्था छ । पालिकामा जनप्रतिनिधि र कार्यालय प्रमुख र अन्य सहकर्मी साथीहरूको निरन्तर साथ र सहयोगले कोरोना नियन्त्रणको लागि कार्य गर्न केही सहज बनेको छ ।
तर पनि निरन्तर फिल्डमा भैरहदा दैनिकी व्यवस्थापनदेखि भैरहेका हरेक गतिविधिहरूलाई व्यवस्थापन गर्न केही समस्या पक्कै रहेको छ । त्यसलाई आवश्यक समन्वय र सम्पर्कमा रहेर विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चलान भने गरिराखेका छौं ।
अहिलेसम्म लमही नगरपालिकामा ९८ बेडको संख्यामा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गरिएको छ । केही समयमै सतवरियामा एकसय बेडको संख्यामा क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने गरी अघि बढेका छौं । हालसम्म १ सय ७७ जनाको नमुना संकलन गरिएको छ ।
जसमध्ये १ सय ७ जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ भने ६९ जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ । यो बीचमा नगरपालिका क्षेत्रभित्र १८ जनाको आरडिटी माध्यमबाट रिपोर्ट संकलन गरिएकोमा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ ।
यो बीचमा भारतबाट ९६ तेस्रो मुलकबाट २ जना र देशका विभिन्न जिल्लाहरूबाट ७९ जना भित्रिएका तथ्यांक रहेको छ भने यो बीचमा पाँच सयजना भारतबाट मानिसहरू पालिकामा भित्रिने सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
एकै पटक धेरै संख्यामा मानिसहरू भित्रिए भने व्यवस्थापनमा समस्या देखिन सक्ने भएकोले सोही अनुसारको तयारीमा सिंगो नगरपालिका जुटेको अवस्था छ ।
क्वारेन्टाइन निर्माणको हँुदै गर्दा पछिल्लो समय केही स्थानमा स्थानीयहरूबाट विरोध आउने क्रम भएकोले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्ने सोंचमा हामीहरू पुगेका छौं ।
हाल नगरपालिकामा लमहीमा रहेको अस्पताल दुईवटा स्वास्थ्य चौकी सातवटा नगर स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट नियमित सेवा दिने काम भइराखेको छ । लमहीमा रहेका निजी अस्पताल र स्वास्थ्य क्लिनिकहरूबाट पनि नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य सेवा दिइराखेको अवस्था रहेको छ ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा यो बीचमा उद्योग वाणिज्य संघ, रेडक्रसलगायत विभिन्न संघसंस्था व्यक्तिहरूले आवश्यक सहयोग पु¥याइरहेको हुँदा विभिन्न कुरा व्यवस्थापनको लागि पनि सजिलो भएको हामीहरूले अनुभव गरेका छौं ।
हाम्रो निरन्तर कामप्रतिको खटाई र सबैको कोरोना नियन्त्रणको लागि साझा बुझाई भएको कारण पनि पछिल्लो समय काममा केही सहजता अवश्य भएको छ ।
तर तत्काल यो समस्या समाधान हुने छाँट नभएकोले आउँदा दिनहरू अझ जोखिमपूर्ण, चुनौतीपूर्ण हुने भएकोले सबैको आवश्यक सहयोगको आवश्यकता रहेको छ ।
लामो लकडाउन र निरन्तर फिल्डमै रहेर काममा खटिरहदा स्वास्थ्यकर्मीहरूमा मानसिक तनावका साथै घरपरिवार र आफ्नो दैनिकी व्यवस्थापनमा पनि निकै समस्या देखिएको अनुभव हामीले गरेका छौ ।
यस्तो विषम परिस्थितिमा स्वास्थ्यकर्मीको मात्र जिम्मेवारी हो भन्ने नठानेर हामी सबैको साझा जिम्मेवारी भएको महसुस गर्न सकियो भने यो युद्धमा हामी सफल हुने म आफूले ठानेको छु ।
हामीहरूलाई यो बीचमा एकाबिहानैदेखि बेलुकासम्म निरन्तर फोनहरू आउने र परिवारलाई समेत समय दिन नपाइरहेको हुँदा अन्य सबै कर्मचारी जनप्रतिनिधिहरूको निरन्तर साथको आवश्यकता रहेको अनुभव हुने गर्दछ ।
क्वारेन्टाइनको भान्सादेखि आउने व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन अफिसको कामदेखि निरन्तर रिपोर्टिङ स्वास्थ्य कार्यालयद्वारा दिइने नियमित सेवा लगायत विभिन्न जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोले काम बाँडफाँड गरी अघि बढन् सकियो भने अझ सजिलो हुने हामीले ठानेका छौं ।
लमहीको हकमा पछिल्लो समय नगर प्रमुख, उपप्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत लगायत सबै फाँटका जिम्मेवार कर्मचारीहरू निरन्तर कामप्रति दिनरात खट्ने र आवश्यक व्यवस्था मिलाउन हौसला प्रदान गर्ने कार्य गर्ने गरेको हुँदा पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूले आफ्ना हरेक समस्या र दुःख भुलेर काममा लाग्न सहज अनुभूति गरेको पाईन्छ ।
कोरोना नियन्त्रणको लागि हरेक नागरिकहरूको सकारात्मक सोंच र कोरोना नियन्त्रणमा आवश्यक साथको आवश्यकतासमेत देखिन्छ ।
निरन्तर २४ घण्टा नागरिकको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउनको लागि खट्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूको दैनिकी अस्तव्यस्त बन्दै गईरहेको छ । यो बेलामा स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल उच्च बनाउनको लागि सबैको सहयोग आवश्यक छ ।
कार्यथलो नै घर
सुरूवातको चरणमा हामीहरूले बाहिरबाट मानिसहरू नभित्रिदा होम क्वारेन्टाइनलाई निकै जोड दियौं । तर पछिल्लो समय महामारीको अवस्था पनि बढ्दै गएको र नेपालका विभिन्न प्रभावित जिल्लाबाट र भारतबाट मानिसहरू आउन थालेपछि क्वारेन्टाइनमा उनीहरूलाई अनिवार्य राख्ने कुरालाई जोड दिएका छौं ।
यो बीचमा दंगीशरण गाउँपालिकामा २५ बेडको क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको र केही दिनभित्र मानिसहरू पालिकामा भित्रिने संख्यालाई मध्यनजर राख्दै २ सय बेड पु¥याउने लक्ष्यका साथ आफ्ना कामहरूलाई अघि बढाएका छौं ।
गाउँपालिकामा चैत महिना यता ३० जना नागरिकहरू पालिकामा भित्रिएको र उनस्हरूमध्य २४ जनालाई क्वारेन्टाइनमा र कतिलाई होम क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ ।
उनीहरूमध्ये अहिलेसम्म गाउँपालिकामा पिसिआर जम्मा ९ जनाको चेक भएको छ भने सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा घरमा पठाइएको छ ।
यो पालिका कसैको पनि आरडिटी चेक भने गरिएको छैन । पालिकामा तत्काल भारतका विभिन्न स्थानबाट १ सय बढी मानिसहरू भित्रिने सक्ने अनुमान गर्दै सोहि अनुसार आफ्नो तयारीलाई तिब्र बनाएका पनि छौं ।
पालिकामा रहेका साविक गाविसका तीनवटा स्वास्थ्य केन्द्र र चारवटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रबाट नियमित सेवा प्रदान भइराखेको छ ।
पालिकामा रहेका एम्बुलेन्सहरूलाई पनि तयारी अवस्थामा राखेका छौं । जनप्रतिनिधि सुरक्षाकर्मीसँग नियमित सम्पर्कमा रहेर आफ्ना काम कुराहरूलाई अघि बढाएका छौं ।
यस अभियानमा रेडक्रसलगायत विभिन्न संघसंस्थाको सहयोग हामीलाई प्राप्त भएको छ । सहयोग गर्ने सबैबाट थप सहयोगको समेत अपेक्षा गरेका छौं ।
कोरोना नियन्त्रण स्वास्थ्यकर्मी र जनप्रतिनिधि एक्लैले गर्ने कुरा असम्भव भएकोले सबैको सहयोगको आवश्यकता हामीले देखेका छौं ।
अवस्था सामान्य भएन र झनपछि झन थप भयावह हुन थाल्यो भने भएका कर्मचारीहरूको समेत अभाव हुन सक्ने अवस्था नआउला भन्न सकिदैन त्यसको लागि हामीले योजना बनाएरै अघि बढ्न आवश्यक रहेको म आफूले देख्दछु ।
शुरूवातमा यो भाइरस नयाँ र विश्वव्यापी फैलिएर त्राही–त्राही पारिरहेको बेला डरसँगै यसको कसरी नियन्त्रण गर्ने र आफूसँगै नागरिकलाई कसरी बचाउने ? भन्ने कुरा निकै चुनौतीको रूपमा देखाप¥यो । स्वास्थ्यकर्मीसँगै जनप्रतिनिधि र आम मानिसहरूमा निकै ठूलो मानसिक समस्यासमेत देखियो ।
सामग्रीहरूबारे जानकारीको अभाव, त्यसको व्यवस्थापन प्राविधिक ज्ञानको उचित जानकारी नहँुदा सामग्री प्रयोगमा समस्या, गुणस्तरसम्बन्धी ज्ञानको अभाव यावत कुराहरूले निकै तनाव भोग्नुपर्ने अवस्थासमेत रह्यो तर पनि विस्तारै–विस्तारै हामीहरूले आफूहरूलाई यो विषयमा आफै सचेत बन्दै जानकार बन्ने कोसिस ग¥यो जसले गर्दा अहिले काम गर्ने कुरामा केही सहज भने भएको छ ।
यो बीचमा फिल्डमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरूले निकै समस्या झेल्नुपरेको छ । त्यही पनि देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै नागरिकको स्वास्थ्यलाई महत्व दिदै हामीहरू फिल्डमा खटिरहेका छौं । सीमित म्यानपावरमा कार्य क्षेत्रमा खटिदा हरेक कुराहरूको व्यवस्थापन गर्न निकै समस्या भैराखेको छ ।
संक्रमण देखिने व्यक्तिहरूको संख्या बढ्दै गइरहेकोले दंगीशरणमा पनि संक्रमण भएका व्यक्तिहरू नहोलान् भन्न सकिदैन । त्यसको लागि जनप्रतिनिधिहरू लगायत सबैलै आवश्यक तयारी गर्न जरूरी देखिन्छ ।
कोरोना नियन्त्रणको सबै जिम्मा स्वास्थ्यकर्मीहरूको हो भन्ने बुझाइको कारण पनि केही समस्या रहेको म आफूले अनुभूति गरेको छु । त्यसैले यो स्वास्थ्यकर्मीको मात्र काम नभएर सबैको साझा लडाइको रूपमा लिएर अघि बढ्न जरूरी देखिन्छ ।
म लगायतका जिम्मेवारी निर्वाह गरेका सबै साथीहरू बिहानै ५ बजेदेखि राति अबेरसम्म निरन्तर काममै खटिएका छौं । यो बीचमा जति थकान हँुदा पनि पेशाभन्दा पनि माथि उठेर हामी सेवाभावको कारण खटिरहेका छौ ।
त्यसैले सबैको साथ र सहयोगको पनि आवश्यकता हामी सबै स्वास्थ्यकर्मीहरूले गरिरहेका छौं । हाम्रो दैनिकी अस्तव्यस्त बनेको न समयमा खाना पाइरहेका छैनौं ।
समयमै सुत्नेको समेत टाइम छैन त्यही पनि हामी कामप्रति थकित भने भएका छैनौं । यो बीचमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा सबै क्षेत्रबाट सकारात्मक साथ र सहयोगको आवश्यकता समग्र स्वास्थ्यकर्मीहरूले गरेका छौं ।
सरकारले लकडाउन घोषणा गर्नु अघिदेखि नै हामीहरू कोरोना नियन्त्रणको लागि विभिन्न किसिमका तयारीहरूमा जुटेका थियौं । जसले गर्दा अहिले काम गर्न केही सजिलो भएपनि समन्वयको अभाव हुँदा केही समस्या देखिएको छ ।
हालसम्म राजपुर गाउँपालिकामा क्वारेन्टाइन बेड संख्या ८२ रहे पनि त्यो पर्याप्त छैन । जसको लागि तत्काल पालिकाका चारवटा स्थानको पहिचान गरी २ सय बढीको क्वारेन्टाइन निर्माणको प्रक्रियामा हामी रहेका छौं ।
दाङको कर्णाली भनेर चिनिने यो पालिकामा मात्र भारतसँग जोडिएका विभिन्न २७ वटा साना नाकाहरू छन् । अधिकांश मानिसहरू मधेशी, थारूलगायत विपन्न वर्गको बसोबास रहेको यो पालिकामा मानिसहरूमा चेतनाको स्तर पनि निकै कम रहेको छ ।
जसले गर्दा यदि कोरोना पोजेटिभ देखिएमा त्यसपछिको अवस्था भयावह हुने निश्चित प्रायः देखिन्छ । यो बीचमा जिल्ला बाहिरसँगै भारतबाट ठूलो संख्यामा भित्रिन सक्ने अनुमान रहेको छ ।
अहिलेसम्म निर्माण गरिएको क्वारेन्टाइनमा ६४ जना रहेका छन् । उनीहरू कसैको पिसिआर टेस्ट हुन सकेको छैन् । पिसिआर टेस्टको लागि विभिन्न क्षेत्र निकायसँग समन्वय गर्दा पनि हुन नसक्नु निकै दुखद् भएको छ ।
हालसम्म पालिकामा २८ जनाको आरडिटी चेक गरिएको र उनीहरू सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । पालिकामा दुईवटा स्वास्थ्य केन्द्र १० वटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरू रहेका छन् ।
सबै स्वास्थ्यकर्मीहरू क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन नियमित स्वास्थ्य सेवालगायतका कार्यहरूमा दिनरात खटिरहेको अवस्था छ ।
हालसम्म एकजनाको पिसिआर टेस्ट नहँुदा स्थानीयलगायत हामी सबैमा खतराको अवस्था देखिन्छ । त्यहि भएर पनि तत्काल पिसिआर टेस्ट हुन आवश्यक देखिन्छ । पिसिआर टेस्ट नहुँदा पूरै पालिका निकै जोखिममा रहेको महसुस गरेका छौं ।
यो बीचमा प्रदेश संघ र स्थानीय तहबीच समन्वय नहँुदा कोरोना नियन्त्रण र काम गराईमा निकै समस्या भएको महसुस भैराखेको छ । सोंचेअनुरूप जाँच गर्न नसक्दा निकै समस्या भएको छ । जसले गर्दा केही समयमै भयावह स्थितिको सिर्जना नहोला भन्न सकिदैन ।
मुख्य समस्या भनेको स्थानीयहरूमा त्रास फैलिदा यसको समाधान गर्न केही समस्या देखिएको छ । हामीले होम क्वारेन्टाइनलाई पनि प्राथमिकताका साथ जोड दियांै तर पछिल्लो समय बाहिरबाट आउने सबैलाई क्वारेन्टाइनमा नै राख्ने गरेका छौं ।
यो बीचमा कोरोना नियन्त्रणको लागि विभिन्न टिमहरू निर्माण गरेर अघि बढ्दा केही सहज भने भएको छ । स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू निरन्तर आफ्नो काममा खटिदिदा काम गर्न केही सजिलोसमेत भएको छ ।
यो बीचमा सुरक्षाकर्मी, रेडक्रस, उद्योगी, व्यापारीलगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूको साथ र सहयोगको कारण कोरोना नियन्त्रणको लागि काम गर्न केही सहज भएको छ । त्यसको लागि सबै सहयोगीप्रति आभारसमेत प्रकट गर्न चाहन्छु र आउँदा दिनमा पनि निरन्तर सहयोगको अपेक्षासमेत गर्दछु ।
कोरोनासम्बन्धी सूचना व्यवस्थापन, प्रेषण, परामर्श, कर्मचारी व्यवस्थापन, कार्यालयका गतिविधि सञ्चालन विभिन्न निकायसँग समन्यव सम्पर्क क्वारेन्टाइन अनुगमन, आफ्नो दैनिकी सञ्चालन यावत कुराहरू गरिरहदा कहिलेकाहिँ निकै थकाईको अनुभूति हुने गरेको छ ।
तर पनि सिङ्गो मानव जाति समस्यामा पर्दा आफ्नो स्वास्थ्यसँगै हरेक नागरिकहरूको स्वास्थ्यलाई ख्याल पु¥याउँदै हामी दिनरात खाई नखाई थकान हुँदासमेत आफूलाई निरन्तर काममै होमेका छौं ।
घरपरिवार, समाजभन्दा पनि माथि उठेर हामी निरन्तर काममा खट्दा पनि आवश्यक सहयोग पु¥याउने निकायसँग सहयोग र समन्वय नहुँदा निकै दुःख लाग्ने गर्छ ।
कोरोना पोजेटिभ देखिएको पालिका
कोरोना नियन्त्रणको लागि देशमा घोषणा गरिएको लकडाउनको समय दुई महिना पार भईसकेको छ । यो बीचमा हामी स्वास्थ्यकर्मीहरू निरन्तर फिल्डमै छौं । कोरोना नियन्त्रणका विभिन्न कार्यहरूमा दिनरात काममै खटिरहेका छौं ।
छिमेकी जिल्लाहरूमा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या निरन्तर बढ्दै जाँदा दाङ जिल्लाको यस पालिकामा पनि दुईजना कोरोना पोजेटिभ भेटिएका छन् ।
जसले गर्दा सिङ्गो गाउँपालिका थप योजनाको साथ कोरोना फैलिन नदिन निरन्तर काममा खटिरहेका छौ । यो बीचमा भारतबाट मात्रै यो पालिकामा १ सय ६ जना फर्किएको तथ्याङ्क रहेको छ उनीहरू सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ ।
पालिकामा अहिलेसम्म १ सय ३० बेड संख्याको क्वारेन्टाइन निर्माण गरेका छौं भने भारत लगायतका बाहिरी जिल्लाबाट फर्कनेको संख्यालाई हेर्दा केही दिनभित्रै यो संख्यासमेत अपुग हुने देखिएकोले हामीहरूले विभिन्न स्थानमा बेड निर्माणको लागि तयारी थालेका छौं ।
यो बीचमा ५६ जनाको पिसिआर चेक भएको छ भने ति मध्येको दुईजनाको रिपोर्ट कोरोना पोजेटिभ भेटिएको छ । जसले गर्दा पनि सबैको ध्यान यतिबेला यस गाउँपालिकामा पनि पुगेको पाइन्छ । यो बीचमा दुईजनाको मात्र आरडिटी चेक भएको छ भने रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ ।
यो पालिकामा भारतसँग जोडिएको नाकाहरूमध्ये सबैभन्दा पुरानो नाका कोइलावास नाकासमेत रहेपनि त्यो नाका भएर भित्रिनेको संख्या न्यून रहेको छ । पालिकामा दुईजना कोरोना पोजेटिभ भेटिएपछि पिसिआर चेकको लागि तिव्रता दिने सोंच बनाएपनि त्यो सम्भव हुन सकिरहेको छैन् ।
मानिसहरूको आउने क्रम निकै बढेको छ । पालिकामा रहेका चारवटा स्वास्थ्य केन्द्र र एकवटा स्वास्थ्य इकाईबाट दिइने नियमित सेवाहरू सुचारू अवस्थामा रहेका छन् ।
सबै स्वास्थ्यकर्मीहरू आफ्नो घर परिवारभन्दा पनि यतिबेला कोरोना संक्रमण फैलन नदिन निरन्तर कार्यालय र क्वारेन्टाइन र फिल्डमै खटिरहेका छौं । यो पालिकामा यो बीचमा पाँच सयभन्दा बढी नागरिकहरू भारतबाट भित्रिने अनुमान गरिएको छ ।
सँगै देशका विभिन्न स्थान रहेका ईट्टा भट्टामा कामको लागि पुगेका नागरिकहरू आइरहेको अवस्थासमेत छ । जसले गर्दा व्यवस्थापनको लागि यो बीचमा निकै समस्या हुने देखिन्छ ।
रेडक्रसलगायतका विभिन्न संघ संस्थाहरूले हामीहरूलाई काममा सहयोग पु¥याई राख्नुभएको छ र आउँदा दिनमा पनि निरन्तर सहयोगको अपेक्षा हामीहरूले गरेका छौं ।
यो स्वास्थ्यकर्मीहरूको मात्र लडाई नभएर साझा लडाई भएकोले कोरोना नियन्त्रण र रोकथामको लागि सबै होमिनु पर्ने आवश्यक्ता देखिएको छ । निरन्तरको कामले कहिलेकाहिँ निकै थकित अनुभव गराउँदछ । तर चाहेर पनि विश्राम भन्ने कुरा हाम्रो लागि टाढाको कुरा जस्तो भएको छ ।
अहिले निरन्तर जनप्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मीको साथमा रहेर हामी फिल्डमा खटिरहेका छौं । राम्रो खाने राम्रोसँग सुत्ने भन्ने कुरा हाम्रो लागि टाढा भएपनि निरन्तर सेवामा खटिरहदा केही आनन्दको अनुभूति पनि हुने गर्छ । गाउँपालिकाबाट निरन्तर साथ र सहयोग मिलिरहेको छ ।
यो बीचमा कोरोना नियन्त्रण हुनुको साटो दिनप्रतिदिन यसको संक्रमण दर झनै बढ्दै जाँदा थप समस्या निम्तिन सक्ने र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न निकै कठिनाई हुने देखिएको छ ।
स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मी र गाउँपालिकाले मात्र समस्या समाधान गर्न सक्छ भन्ने लाग्दैन त्यसको लागि विभिन्न निकायको महत्वपूर्ण साथ र सहयोगको आवश्यकता देखिने छ ।
कतिपय अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीको मात्र जिम्मेवारी हो भन्ने ठान्नाले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई थप समस्या भईरहेको अवस्था छ ।